Dadkii maalgaliyey boorarkii la dul heehaabiyey gegida West Brom ee “Wenger Out” oo la ogaaday - Gool FM	twitter
Dadkii maalgaliyey boorarkii la dul heehaabiyey gegida West Brom ee “Wenger Out” oo la ogaaday
(London) 20 Mar 2017. Koox taageereyaal Arsenal ah oo ku sugan Hong Kong ayaa ka dambeeyey boorkii lagu taageerayey Arsene Wenger ee la dul heehaabiyey gegida Hawthorns kulankii sabtida ee West Brom.
Laba boor ayaa lagu soo bandhigay dusha gegida Baggies iyada oo wali sii socdo cadaadiska saran Wenger kaddib markii ay Arsenal guul darreysatay kulankii afraad shantii ugu dambeeysay Premier League-ga.
Boorkii hore waxaa qarashkeeda lagu bixiyey lacago ay iska uruuriyeen dad tiro badan (Crowdfunfing Campaign) oo looga soo horjeeday Wenger si uu kooxda uga tago dhamaadka ololahan.
Wenger su’aal ayaa laga weydiiyey boorarka kulanka kaddib balse waxa uu sheegay in uusan dusha sare eeg eegin inta ciyaartu socoto kahor inta uusan qirin in uu u noolyahay dhalleeceynta.
Simon Moores waa duuliye u shaqeeya Airads, shirkaddii soo dul marisay boorka gegida Hawthorns sabtidii waxa uuna wax ka yara taabtay sida ay sheekadu ku dhacday.
“Kooxda Hong Kong ayaa ka dambeeysay boorka ‘Xushmadda’, waxa ayna doonayeen in dadku ogaado in ay ka socoto Hong Kong.
“Waa caqabad weyn in aad la macaamisho taageereyaal dhaqaale isu geeyey maxaa yeelay kuma nool isla hal duni waxaana sameeyaa aniga oo fahansan halista ay leedahay cumilo ahaan. Filashada kol walba waa mid sare iyo sidoo kale isku dayga in dhaqaalaha la ‘isugu keeno waa mid adag.
“Waxa dhacay Jimcihii waxa weeye labada dhinacba waxa ay sameeyeen xulasho ay iigu sheegayaan qodobada iyo wadada aan u marayo halkaas oo ay sugaan in ay arkaan hadii farqi jiro. Hawada markii aan kacay halis ayey ahayd. Mar waxaan ka kacayey 64 Knots – waxa ay igu qaadatay laba saac in aan aado Birmingham.”